DAAWO-Taliska ciidanka Garoowe oo awaamiir soo saaray, mas’uuliyiin digniin loo diray & dabley gacanta lagu dhigay.
September 15, 2020 Xuseen 0
Laamaha ammaanka ee gobolka Nugaal ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo qorshaysan iyo kuwa joogta ah oo ay maalmihii ugu dambeeyey ka sameeyeen magaalada Garoowe iyo deegaamo hoosyimaada.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal gaashaalne sare Maxamed Aadan Jaamac oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaalada Garoowe ka sameeyeen howlgallo lagu soo qaqabtay dhalinyaro ku howlanayd falal isugu jira khalkhalgelin ammaan, dhac moobil iyo tuugaysi kale.
Gaashaalne sare Maxamed Aadan Jaamac, wuxuu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen shaqsiyaad dilal ka geystey deegaamo katirsan goblka iyo kuwa ku eedaysan dhaca shirkado ganacsi oo Garoowe kuyaal.
Dhanka kalena, gaashaalne sare Maxamed Aadan Jaamac waxa uu digniin u diray ciidamo hubaysan oo iyagoo aan shaqo kujirin dhexmara magaalada Garoowe, wuxuuna sheegay inay gacanta ku dhigi doonaan ciddii lagu helo arrintaasi.
Ugu dambayn wuxuu digniin u diray wadayaasha gaadiidka dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee kaxaysta baabuurta aan lahayn aqoonsiga dowliga ah ama taarikada oo uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan.